October 28, 2008, 2:22 am
အောက်ကဟာကတော့ ဒီပို့စ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ စီဘောက်စ်မှာ ထားမရတော့ ဒီမှာပဲရေးလိုက်ဦးမယ်။ လင်းလက်တစ်ယောက်လည်း သွားပုတ်လေလွင့် အပြောခံ အတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်ထင်တယ်။ တို့လည်း စီဘောက်စ်ဖြုတ်ချပြီး ကွန်မက်စီစစ်လုပ်လိုက်ရတာသာ ကြည့်တော့။ လာပြောတဲ့သူတွေက ယောကျာ်းအရင့်အမာကြီးတွေ။ သူတို့အဆင့်အတန်း ဘယ်လိုနားလည်ရမယ်မှန်းတောင် မသိလောက်အောင်ပဲ။ Don’t care, fri!
Comment by missthonnthonn October 28, 2008 @ 7:52 am
အော်…သူလည်း စီစစ်ရေးလုပ်ထားတယ်။ ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်။ မဟုတ်ရင် မလိုတဲ့သူတွေကြောင့် စိတ်ရှုပ်ရမှာ။
Comment by missthonnthonn October 28, 2008 @ 7:53 am
Comment by LIN LET KYAL SIN October 29, 2008 @ 4:33 am
Comment by chaos October 29, 2008 @ 8:52 am
ဖတ်လို့ လည်း ကောင်္ငးတယ်…..
ညီမ နဲ့ နိုင်ငံေ၇း က အလှမ်းဝေးပါတယ်…..
ယနေ့ အချိန်ထိ နအဖ မသေသေးဘူး…..
Comment by pi October 30, 2008 @ 1:44 am
Comment by Apprenticeship November 1, 2008 @ 2:48 am